Kedu mba ndị nọ n'ihe ize ndụ ịga njem na 2018? | Akụkọ Njem
Kedu mba ndị nọ n'ihe ize ndụ ịga njem na 2018?
Maria | | Nkechi, njem
Mgbe ị na-eme njem, ọ dịghị mgbe ọ ga-afụ ụfụ ịkpachara anya ma kpokọta ihe niile ịchọrọ iji nwee njem a na-agaghị echefu echefu ma dịkwa nchebe. Kwakọba ihe ndị dị mkpa dị mkpa, dịkwa ka ịnakọta ọtụtụ ihe ọmụma banyere ebe anyị ga-aga.
Otu nzukọ International SOS na Njikwa Ihe Egwu ebipụtala akwụkwọ na ihe ọmụma banyere ndị njem nwere mmasị na 2018 gbasara mba ndị kasị dị ize ndụ ịga ma ọ bụ site n’echiche ahụike, ọnọdụ nke okporo ụzọ ma ọ bụ ime ihe ike.
Nzukọ a na-ekewa mba site na agba dịka ọkwa nke ọghọm ha dị. N'ụzọ dị otú a, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ pụtara nke dị ala, odo dị ala, oroma na-anọchite ọkwa dị larịị, ọbara ọbara na-anọchite anya nnukwu ihe egwu na garnet pụtara oke. Kedu ndị dị n'otu ụdị ma ọ bụ ọzọ?
Mba dị ka Denmark, Norway ma ọ bụ Switzerland dị ka ndị kasị nwee nchebe ebe Spain, Australia, France, United Kingdom ma ọ bụ Chile nọ na nsogbu dị ala. Kama nke ahụ, na agba agba nke pụtara Afghanistan, Mali, Libya, Syria, Yemen ma ọ bụ Somalia.
Banyere nsogbu metụtara ahụike, etinyere agba agba n'otu ụzọ ahụ, mana a na-agbakwunye aja aja maka mba ndị ahụ na-emepe ngwa ngwa ihe egwu. Russia, India, China ma ọ bụ Brazil nọ na ngalaba nke ikpeazụ. Na uhie anyị na-ahụ Haiti, Burkina Faso ma ọ bụ North Korea ebe Japan, United States, Portugal, Ireland, Uruguay, Canada ma ọ bụ New Zealand dị ka ezigbo nchekwa.
Akwụkwọ ọhụrụ sitere na nzukọ International SOS na Control Risks nzukọ maka 2018 na-ekwu maka nchekwa okporo ụzọ. Imirikiti mba Europe nwere asphalt a pụrụ ịdabere na ya, ọ bụ ezie na enwere mmụba n'ihe egwu na ọwụwa anyanwụ. N’ụzọ dị iche, Asia na Africa nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke okporo ụzọ kacha njọ ka ha na-edebanye aha ọtụtụ ihe ọghọm. N'ime otu a anyị hụrụ Vietnam, Ivory Coast, Thailand ma ọ bụ Angola.
1 Gịnị ka Ministri nke Ofesi na-ekwu maka ya?
2 Kedu mba ị na-adụ ọdụ ka ịghara njem?
3 Ndụmọdụ maka njem
Kedu ihe ọ na-ekwu Ministri nke Mba Ọzọ gbasara ya?
N’echiche a, Mịnịstrị nke Mba Ofesi nke Spain na-eji nlezianya emelite weebụsaịtị ha nke ọma site na ozi nke ndị nnọchi anya na ndị nnọchi anya gọọmentị na-eziga kwa oge. Tupu ịga njem ebe ọ bụla, ọ ga-adị mma ma ị mara ihe ụlọ ọrụ a na-agwa ụmụ amaala.
Mmebi nke ọnọdụ nchekwa na ụwa n'ihi egwu ndị na-eyi ọha egwu mba ụwa, ọnọdụ adịghị mma nke okporo ụzọ ma ọ bụ ọnọdụ adịghị ọcha nke mba ụfọdụ dugara na Ministri nke Ofesi na Imekọ Ihe ọnụ ịrịọ ka ndị njem mee ihe mgbochi, zere ọnọdụ ihe egwu ma debanye aha na Embassy ma ọ bụ Consulate General nke Spain iji mee ka ha nọrọ na mberede.
Kedu mba ị na-adụ ọdụ ka ịghara njem?
Na mkpokọta, Mịnịstrị nke Mba Ọzọ na-adụ ọdụ ka ịghara ịga mba iri abụọ na otu n'ụwa nke kachasị na Africa, Asia na Oceania n'ihi ịdị egwu ya: Afghanistan, Iraq, Iran, Lebanon, Pakistan, North Korea na Syria na Asia; Libya, Egypt, Somalia, Chad, Nigeria, Liberia, Guinea Bissau, Mauritania, Niger, Burkina Faso, Mali, Central African Republic na Burundi na Africa na Papua New Guinea na Oceania.
Usoro mkpuchi ahụike na njem: Ebe ọ bụ na n'ọtụtụ mba ndị ọrịa na-akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ ma nwee ike ịdị oke ọnụ, a na-atụ aro ka ị wepụ mkpuchi ahụike na, ọ bụrụ na ọrịa ma ọ bụ ihe ọghọm n'oge njem ahụ, na-eme ka mkpuchi zuru ezu. Insurance mkpuchi ga-enyekwara anyị aka ma ọ bụrụ na anyị ezuo ohi, tufuo ụgbọ elu ma ọ bụ ibu.
Kwanyere iwu na omenala obodo ugwu: Omume iwu obodo anyị si bịa nwere ike ọ gaghị abụ nke iwu na obodo anyị na-aga. Maka nke a, ọ ga-adị mma ma ị jụọ nke ọma gbasara ebe a na-aga. Ọ dịkwa mkpa ilekọta uwe n'ihi na ụfọdụ uwe nwere ike imerụ uche ma kpatara nghọtahie na-adịghị mma.. Karịsịa ebe okpukperechi gosipụtara ụzọ ndụ ndị mmadụ.
Foto nke akwụkwọ: Iji zere ụjọ na-ezu ohi ma ọ bụ ọnwụ, ọ na-atụ aro ka ọtụtụ photocopi nke mbụ anyị akwụkwọ (paspọtụ, amụma mkpuchi, akwụkwọ ndenye ego ndị njem, visa na kaadị kredit) ma debekwa akwụkwọ na nke mbụ iche.
Ndebanye aha na ndekọ ndị njem: Ndebanye aha nke ndị njem nke Mịnịstrị nke Ofesi na-enye ohere ka edekọ data nke ndị njem niile na ndị nke njem gị ka, site na nkwa niile nke izu nzuzo, a ga-enweta gị na ihe mberede.
Mara asụsụ ahụ: Ọ bụ ezie na ịsụ asụsụ bekee ị nwere ike ịgagharị n’akụkụ ụwa niile, ọ dịghị ewute ịmụ asụsụ ọhụrụ. Inwe obere ihe omuma banyere asusu obodo bu uzo mmadu si eme ka ndi mmadu mara ya.
Weta ego ị ga-eji kwụọ ụgwọ: Ọ dị mma iburu ego ga-ezuru ma kwụọ ụgwọ ihe omume ndị ahụ na-atụghị anya ha n’oge njem ahụ, ma ọ bụ ego, akwụkwọ ndọrọ ego ndị njem, ma ọ bụ kaadị kredit.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Kedu mba ndị nọ n'ihe ize ndụ ịga njem na 2018?